Tih A Nung TuK Ee: Malaysia Ah Myanmar Minung An I That , Video Zoh Chih – Myanmar Chin
Tih A Nung TuK Ee: Malaysia Ah Myanmar Minung An I That , Video Zoh Chih
April 4, 2020 Myanmar Chin Myanmar 0
Malaysia Ah Myanmar Minung Tmi An I That
Malaysia ah rianatuan mi Myanmar Mimung timi cu Bia an i al nak ah Namte in an i that.( Myanmar minung tiasi i Chinmi cu si dawhasi lo,An Min ahafiang)
Malaysia ram zong Covid-19 ruangah riantuan angah lo i Inn cio te ah umasi tiah theihasi. A sinain Myanmar minung nih an tuannak hmun hi Sehzungasi iacozah nih nawlaonh caah mawasi theihasilo,Rian an tuan ko tiah theihasi.
Chun ah minung2an tuan i zan qh minung pahnih an tuan tiah theihasi. Chun ah rian tuan tu ding m8linung2an kap lio ah Zan ahatuan minung pahnih cu Inn ah an um ta i Zu an ding ti, Cun bia qn i al i Namte in pakhat pa nihahawi pa cuahngawng bak ahaAh!. Cu ticun Namte inaah hnu ahathi lo, A sinain Namte ahmang tu pa cu Inn dot5cung incunahnu leiatawnnak ahatla sual iatlak nak hmun ah athi beh.
Namte ah atong mi pa hi Pakuku ah aummi amin ah Moe Ko Ooasi iaNamte ahmang nainathi mi pa hi Magwe ramthenaummi U Ti g Soeasi tiah theihasi. A tu an i thah nak hmun hi Malaysia ram Peneng timi hmun ahasi tiah theihasi.
Covid 19 ဖြစ်ပွားပြီး Lock down ချထားသောမလေးရှားနိုင်ငံ၌ မြန်မာနှစ်ဦး သောက်စားမူးယစ်ရာမှ ခိုက်ရန်ဖြစ် တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ …ဖြစ်သွားတဲ့နေရာက မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်းဘာသာဝပ်ထဲက တမန်ပလန်းကီး ရပ်ကွက်မှာ ဒီညနေဖြစ်သွားတာပါမလေးအစိုးရကလော့ဒေါင်းချထားပေမယ့် စက်ရုံကတော့ ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်ပဲလား နေ့ဆိုင်းညဆိုင်းခွဲပီး လည်ပတ်နေပါတယ်။ နေ့ဆိုင်းသမားတွေ အလုပ်သွားတုန်း အခန်းထဲမှာ ညဆိုင်း၂ယောက်ကျန်နေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါသူတို့၂ယောက်ထဲ သောက်စားပီးရန်ဖြစ်ကြတယ်လေ။ ဝတုတ်တုတ်တစ်ယောက်က ကျန်တစ်ယောက်ကို စကားများ ရန်ဖြစ်ရာကလည်ပင်းကို ဓါးနဲ့လှီးတယ်တဲ့။ ဓါးနဲ့လှီးတော့ တွန်းဟာရုန်းဟာ လှီးဟာနဲ့ လုံးထွေးရင်းနဲ့ ဓါးနဲ့လိုက်လှီးတဲ့ကောင်က ၅လွှာအပေါ်ထပ် နောက်ဘက်အပေါက်ကနေ ပြုတ်ကျသွားတယ် ပွဲချင်းပီးသေသွားတယ်။ လှီးခံရတဲ့သူကတော့ လည်ပင်းဓါးရာကြီးနဲ့ အခန်းထဲလဲကျနေခဲ့တယ်။ ခုတော့ ဒဏ်ရာရသူကို ဆေးရုံသယ်သွားပါပြီ။ အလောင်းကတော့ ခုလေးတင် ရဲကောက်သွားပြီ။ လည်ပင်းလှီးခံရတဲ့ကောင်လေးက ပခုက္ကူဘက်က သူ့အမည်က မိုးကိုဦး၊ လည်ပင်းလှီးပီး အောက်ပြုတ်ကျသေသွားတဲ့သူက မကွေးတိုင်း ရွှေနတ်တောင်ဘက်က ဦးသိန်းစိုးတဲ့။ မလေးရှားမှာ ရောဂါတွေအရမ်းတိုးလာနေလို့ အားလုံးစိတ်ညစ်နေကြတာ မြန်မာတွေကသောက်စားမူးရူးပီး လူသတ်တဲ့ထိဖြစ်နေကျတာ ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက် အရှက်ရစရာပါပဲ။သူတို့မိသားစုတွေ သိအောင် လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါZN.H 🇦🇺
Posted by Zarni Tike on Saturday, April 4, 2020
US In Nupi Thit A Tlungmi Chin Pa Thong An ThlakTaktak A Si Cang Lai
AA A Doh Tu Ding Chin Ralkap Thar Dirh A Herh Rih Lonak Kong Tial Mi